အိမ် - လုံးချင်း အိမ်နှင့်ခြံငှားမည် Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ် classified: လုံးချင်း အိမ်နှင့်ခြံငှားမည်
🏡 တာမွေမြို့နယ်၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရောင်အိမ်ရာရှိ လုံးချင်း အိမ်နှင့်ခြံငှားမည်။ 🏡 အကျယ်အဝန်း(80´×80´) 2-RC, 🏡 3-Master Bedroom, 3-Bedroom. 🏡 5-Air con, ပါကေးခင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီး။ 🏡 နေရာကောင်း၊ ကားပါကင်အဆင်ပြေသည်။ 💰 စျေးနှုန်း _ ၁၆ သိန်း 📲📲📲📲📲 09-752 7575 47, 09-7789 69 226. 09-250 998 522, 09-340 185 131.
အရွယ်အစား 1800.00 Square Feet
4RC / လုံးချင်းတိုက် ဌားမည်
ရွှေတောင်ကြား လူနေ / ကုမ္မဏီ / ရုံးခန်း ဌားမည်
အရွယ်အစား 18000.00 Square Feet